Ahoana ny fomba famindranao ireo zotram-pivoahana mankany Garmin? - Garmin
Tena > Garmin > Manondrana ny lalana mankany garmin - lalana feno
Manondrana ny lalana mankany garmin - lalana feno
Ahoana ny fomba famindranao ireo zotram-pivoahana mankany Garmin?
Mba alalanahifandray amin'nyGarminfitaovana, nylalanadia tsy maintsy ho kintana. Avy amin'nylevitratranokala, sokafy ny menio milatsaka ambany amin'ny Dashboard ary safidio ny MyLALAN'NY MPANAFIKA. Safidio ny fampiharana finday, ianao> Profile>LALAN'NY MPANAFIKA.06.30.2021
Androany dia miditra amin'ny app Bryton Active isika, mahita làlana amin'ny Strava noforoninay ary nampakatra azy ho any amin'ny Rider 420. Hanombohana, andao hiditra amin'ny app Bryton Active. Hamarino tsara fa ny Rider 420 anao, na izay fitaovana ampiasainao, dia velomina ary efa mifandray amin'ny fampiharana Bryton Active.
Hitanao eto fa efa mifandray izahay. Hanomboka amin'ny kiheba COURSE isika eto dia ho hitanao fa ny safidy faha-3 etsy ambany dia ny STRAVA, mandrosoa ary ampiasao ny bokotra toggle ahafahana manao izany. Rehefa afaka segondra vitsy dia misokatra ny varavarankely fidirana STRAVA.
Raha vantany vao mavesatra izany dia manana safidy vitsivitsy eto ianao. Hiditra miaraka amin'ny adiresy mailaka izahay, rehefa tafiditra ny antsipirihanao ianao, tsindrio ny bokotra fidirana izay hitondra anao amin'ny efijery fahazoan-dàlana Bryton Active. Azonao vakiana eto ny fampahalalana.
Amin'ny ankapobeny dia hamela an'i Bryton Active hiditra amin'ny angon-drakitra Strava misy anao hisintona ireo zotra ireo dia hanery ny AUTHORIZE hanome alalana an'ity fifandraisana ity. Raha vantany vao manao an'io isika dia hiverina any amin'ny tabilao COURSE ary ho hitanao fa ny STRAVA dia miasa ankehitriny. Homena iray segondra izy io ho entina.
Ary raha vantany vao vitantsika izany dia mankanesa any amin'ny faritra MY ROUT aho, raha vantany vao ao amin'ny ROUT MY, dia ho hitanao fa ny lalanay STRAVA dia aseho izao miaraka amin'ny marika STRAVA eo akaikiny. Mandroso ary manery an'ity. Avy eo dia hitantsika fa ny làlana noforoninay tao STRAVA dia aseho amin'ny app Bryton Active Avy eto ny zavatra hataontsika voalohany dia ny mifantina TRANSFER TO FILE WITH TURN-BY-TURN INFORMATION -mba fampahalalana miverina izay azontsika jerena amin'ny fitaovantsika, ny làlana, amin'ity ohatra ity dia hamela azy ireo hitovy isika ary tsindrio fotsiny OK.
Mitaky iray segondra ny fampidirana azy rehefa niditra ny fampahalalana isaky ny mandeha, ka rehefa miverina amin'ny MY ROUT aho ary mavesatra dia ho hitanao izao ny làlana noforoninay tamin'ny tsindrio isaky ny misy ny kisary STRAVA ary ny kisary isam-baravarana eo akaikiny Tsindrio eto ary azontsika atao izao ny manampy ny fampahalalana POI raha tiantsika. Amin'ity ohatra ity dia tsy hanisy fampahalalana POI izahay, fa raha te hanana dia afaka manampy karazana tampon-tampona hafa, sakafo, vonjy taitra na karazam-baovao hafa. Miala eto àry isika.
Avy eo dia mankeny amin'ny zoro ambony ambony izahay ary manery ny teboka 3 eo amin'ny efijery ary hisafidy ny safidy izahay: SORATRA NY ROUT TO DE DEVICE, ny famoahana dia haharitra iray segondra fotsiny satria hafindra any amin'ny Rider 420. Raha izany no izy , tsindrio OK ary tohizantsika ny Rider 420. Mandehana any amin'ny menio ary safidio ny safidy FOLLOW TRACK.
Raha vantany vao eto izahay dia hisafidy ny Fijery. Hitantsika izao fa ao amin'ilay lisitra ny làlana noforoninay. Eto ianao dia afaka mahita ny lalana noforonina ary tsindrio OK hanombohana sy hanombohana ny zotra.
Ary izao no anafanao ny làlan'ny STRAVA avy amin'ny kaontinao STRAVA mankany amin'ny Bryton Rider 420 na fitaovana hafa mifanentana aminao
Azoko atao ve ny manondrana avy any amin'ny grava mankany Garmin Connect?
Raha te-hamerina ny angon-drakitrao ianao na hizara rakitra,levitramanome ny safidy ho 'fanondrananatoy ny GPX 'avy amin'ireo pejin'asao. Ity rakitra ityafakaalaina amin'ny aGarminfitaovana miaraka amina fizotran'ny zotra (toy ny aGarminEdge 800), nozaraina tamin'ny mpampiasa hafa, na notehirizina ho an'ny firaketanao.06.06.2021
(Misokatra ny varavarana ary mihidy) - Trainiac maraina. Betsaka ny zavatra tokony hatao. Fampianarana bisikileta fohy nefa mampatahotra kely.
Ie. Ie. Eny Eny Eny.
Satria vanim-potoana Zwift henjana io, ekeko fa betsaka ianareo ankehitriny any izay, na dia nitombo isa aza ny mpitaingina Zwift tamin'ity taona ity, dia toa vao mainka nahazo sambo. Noho izany dia betsaka ny fanontaniana momba ny fomba fananganana Zwift. Ary iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra mila fantatry ny olona ny fomba fampidirana ny Zwift ka manosika azy ho any Strava aorian'ny fitsangatsanganana tsirairay.
Manosika ho azy araka ny Drafitra Ankehitriny, Peaks Training na Garmin Connect. Na inona izany na inona. Ka rehefa avy niady nandritra ny antsasak'adiny teo ho eo izahay dia izany no hataontsika.
Toa mampihomehy. Lalàna? Lasa izao. (mozika faly) Oh wow! Whoa, whoa, whoa.
Whoa. Ka, izany dia fiara 35 minitra nisy hafanana 10 minitra. Fanafana mafana kely voaporofo ara-tsiansa.
Ary avy eo inefatra intelo minitra, mazava tsara amin'ny alàlan'ny FTP. Ohatra, apetraho amin'ny 300 watts ny gorodoko, ny FTP misy ahy izao any izao, mety ho 260. Ka tazomy eo ambonin'ny 300 mandritra ny telo minitra foana.
Mialà sasatra telo minitra ao amin'ny faritra faharoa, manodidina ny 130 watt. Ataovy inefatra ity. Miezaha tsy hanary ny farany.
Mila fanatanjahan-tena hafa aho ry zalahy. Okay. Mila miborosy nify aho.
Na dia hiverina aho ary hilaza aminao ny fomba hananganana Zwift. Okay? Mandritra izany fotoana izany, raha manao izany aho, maninona raha manaraka ahy amin'ny Zwift. Ny anarana voalohany dia T.
Ny anarana farany dia Riathlon Space Taren. ok? Noho izany, betsaka ny Zwifters vaovao any. Ary mora ny manangana Zwift raha resaka fiara.
Ny zavatra fitantanan-draharaha rehetra, toy ny faktiora, ny fifandraisana amin'i Strava, Garmin Connect, Training Peaks, tsy misy na iray aza tena atao ao amin'ny app. Ka raha mankany Zwift ianao dia hitsambikina amin'ireo efijery rehetra eto. Ary hanontany ianao hoe: 'Aiza no anaovako izany? , na izany aza, mandehana any amin'ny Zwift mpiara-miasa rehetra.
Ary hoy ianao hoe, 'Oh. Eto izany. Izy io dia ao amin'ny App Zwift Companion. 'Saingy tena interface hafa fotsiny ho an'ny fampiharana Zwift lehibe io.
Ka ahoana no hanombohanao mampiditra ny fampihetseham-batanao rehetra amin'ny programa fampihetseham-batana rehetra? 'efa voaomana ve ny zava-drehetra? Avelao aho hanoro anao. Na inona na inona alainao amin'ny telefaona findainao, ny iPad-nao. Aza miraharaha.
Atsipazo ireo. Avelao eo amin'ny biraonao, ny solosainao findainao na ny takelakao. Ary na aiza na aiza no alehako dia ny teboka Zwift dot com.
Eo no manomboka mitantana ny zava-drehetra, na ny faktiora na ny toe-javatra handefasana ny fotoam-panofanana rehetra ataonao any Zwift. Eto. Manomboka amin'ny fanjakana maty isika.
Ary karazana miafina eto io, fa mipoitra ihany amin'ny farany. Ary maniry ianao, eto, kitiho ny Sign In. Miakara ary mandehana amin'ny toerana iray ihany izay nanatonana anao Ho any amin'ny mombamomba ahy etsy ambany.
Tsindrio eo dia hitondra anao any amin'ny backend Zwift ianao. Raha mankany amin'ny ankavia havia ianao, eto dia kitiho ny Settings. Eo no manomboka mitantana ny anaranao, ny tarehimarika asehonao, lahy, vavy, ny habeny, ny adiresy mailakao, izay fikambanana misy anao.
Izay tianao hampifandraisina amin'ireo kaonty hafa rehetra dia mazava ho azy ny angon-drakitra fifandraisana avy amin'i Strava, Training Peaks ary Garmin. Ireo no lehibe izay tadiavin'ny olona matetika. Ka tsindrio fotsiny eo ambanin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Ary aorian'izany, mora dia mora ny mandehandeha anao amin'ny fizotrany tsikelikely. Tsindrio Manome fahefana. Tianao hanana fidirana amin'ny mombamomba anao sy ny angona i Zwift.
Ie. Ampidiro hetsika ho anao ary amboary ny piraofilinao. Ie.
Midira amin'ny mombamomba anao manokana momba ny hetsika ataonao. Omeo lalana izany rehetra izany. Ary avy eo, tsy ny intuitive indrindra, tonga amin'ity efijery lehibe ity ianao, fa izao kosa mifandray.
Avereno ity dingana ity ihany ho an'ny Training Peaks Tsy toa tranokala Zwift izany. Toa ny tranokalan'ny Training Peaks na Strava na Garmin Connect izany satria mandefa anao any Strava, Garmin Connect, Training Peaks ary miteny hoe: “Hey, eh, nahazo fangatahana avy tamin'i Zwift izahay hampifandray anao amin'ny kaontinao eto. Tsara ve izany? ”Ary raha vao miditra ianao ary miteny hoe“ mamela, ”dia mamerina anao any Zwift.
Avereno fotsiny izany ho an'ny kaonty rehetra tadiavinao ary avy eo amin'ny farany dia hasehoko anao ny zavatra tokony hatao. Eny ary, ka aleo mieritreritra fa nahavita fanazaran-tena ianao. Mipetraka eo amoron-dàlana ianao ary mieritreritra hoe: 'Tsara' Eny, inona no hataoko izao? ' Inona no ataonao mba hijanonana rehefa vitanao ity fampiofanana ity ary alefaso any amin'ny mombamomba anao rehetra rehefa miato ianao, tsindrio ny menio, atsaharo ny mitondra fiara na mihazakazaka.
Hilaza izy io hoe: 'Satria nampifandraisiko tamin'ny kaonty Zwift amin'ny Strava, Training Peaks, ary Garmin dia tianao halefa ho azy rehetra amin'ny olon-drehetra izany. Ankehitriny mila ampifandraisinao amin'ny Training Peaks sy Garmin izany raha te handefa azy roa ianao. Na dia nanamboatra Training Peaks aza ianao hahazoana Garmin, dia ampy ny hilazan'ireto rindrambaiko roa ireto fa tsy tokony hanaovanao fanazaran-tena ianao.
Ka raha te handefa amin'ny Training Peaks sy Garmin ianao dia tsy afaka mandefa izany any Garmin fotsiny ianao ary tsy mila mandefa izany any amin'ny Training Peaks. Mila ampifandraisinao ireo roa ireo satria ireo fampihetseham-batana Zwift nalefa tany Garmindon ireo dia tsy hiverina any amin'ny Training Peaks. Ampifandraiso izy roa ary rehefa vita izany dia vonjeo.
Ary avy eo dia nakarina ho azy rehetra ireo. Ahoana raha tianao rehefa tena te-handray ny angon-drakitra taloha Zwift-nao ianao ary mampakatra azy am-pitiavana rehefa tsy azonao izany? Hiditra ao anatin'izany isika afaka kelikely. Ka andao hatao hoe nahavita hetsika iray ianao, ary na inona na inona antony, tsy niainga tamin'ny sehatra rehetra tianao hanaraha-maso ny fanazaran-tena nataonao izany, na angamba misy vitsivitsy aza ny fampihetseham-batana efa nataonao ary tianao avy eo mampakatra sy mampakatra.
Voafandrika fotsiny tao amin'ny Zwift aho ary tsy nidina mihitsy. Ity ny fomba hahazoana ireo fampihetseham-batana ireo ary ampiakarinao. Tahaka ny teo aloha ihany dia handeha hitety ny hevitro Zwift point com isika.
Eny ary, rehefa tonga any amin'ny Zwift Point com anao aho, mijanona amin'ity pejy lehibe ity, mankanesa any amin'ny fisie tianao hampidirina ireo sehatra hafa, kitiho ny fampidinana, ary hisintona rakitra mety amin'io fampihetseham-batana manokana io ianao dia mila mandeha. isaky ny sehatra tsirairay, mandehana any amin'ny Strava dot com ary mankanesa eto amin'ny dashboard eto. Arotsaho eo ambonin'ilay mari-pamantarana miampy eo ankavanana ambony. Kitiho ny activité upload.
Kitiho ny rakitra. Safidio ny fisie ary mankanesa any amin'ilay fisie mety ary kitiho ny Open. Tsy hanao an'io aho satria Duplicate izany fa izany no ataonao amin'ny Strava Go to the dot Training Peaks dot com app ary hitondra anao mody izy io.
Ie. Tsindrio Upload. Ataovy toy izany koa.
Ampidiro ny rakitra. Ary hanao toy izany koa. Tsy maintsy mamonjy sy manidy raha te hitahiry azy ianao.
Ho an'i Garmin, mandehana mampifandray ny teboka Garmin dot com. Tsindrio ity fampakaranao rahona kely ity. Manafatra angona.
Raiso ity rakitra ity. Ary safidio izy ireo. Ary tsindrio ny angon-drakitra manafatra anao.
Ary izao no fomba fampidiranao tanana ny fampihetseham-batana Zwift amin'ireo sehatra rehetra ao amin'ny Zwift, ireto ny sasany amin'ireo zavatra madinidinika tokony hizaranao. Tahaka ny nolazaiko, maro amin'ireo bizina fitantanan-draharaha ao anaty teboka ao amin'ny Zwift dot com. Tsy tena ao amin'ny fampiharana.
Ny zavatra rehetra izay tena ao anaty fampiharana toa ny mampifanaraka ny avatar anao sy ny mitondra fiara marina, fa raha tsy izany, ny faktiora, ny mombamomba ny mombamomba ary ny fanamboarana rehetra dia atao ao amin'ny Zwift-Dot-com-ko. Arosoy ary, raha mbola eo ianao dia manaraha ahy. T ny anarana voalohany, ny anarana farany dia Riathlon space Taren.
Hataontsika lehibe ao Zwift amin'ity taona ity. Ny olona manaraka ary ao amin'ny vondrom-piarahamonina Trainiac, izahay dia hanao mitaingina Zwift. Ataontsika mafy ny Zwift, ka alao antoka fa araho ianao.
Tapaka nitehaka be ihany aho tao. Okay, trainiacs ho avy.
Afaka manondrana zotra avy any Strava ve ianao?
levitramanome ny safidy ho an'ny mpamandrika misintona nafanondranananylalanadata an'ny hafalevitrahetsika ataon'ny atleta. Amin'ny pejin'ny hetsikaianareomijery izy,ianareohahita aho aGPXBokotra misintona hita eo amin'ny zorony ambony ankavanana amin'ny sari-tan'ilay hetsika (asongadina etsy ambany).05.27.2021
Mila premium premium ve aho mba hifaneraserana amin'i Garmin?
Na dia mbola mila alevitraFihaonambePremium an'ny sakafosubscription tier) hamoronana làlana manokana, ity vaovao ityGarmin SyncNy endri-javatra dia ahafahana manome kintana ny làlan'ny dian'ny namanao ary mandeha ho azymifandrindraizy ireo miaraka amin'ny fitaovanao raha mahazo aingam-panahy ianao (natehanandrana hangalatra KOM / QOM vitsivitsy).14 2020.
Azonao atao ve ny manondrana ny zotra mankany Google Maps?
Tsotra fotsiny, apetaho aloha nyDiet mitainginarohy pejy mankany amin'ny http://cosmocatalano.com/levitra-gpx-fanondranana/. izanydiamamorona rohy fisie gpx avy ao amin'nyDiet mitainginapejy. Avy eo apetaho ao anaty ilay rohy 'misintona rakitra gpx'Google Mapssahan'ny fikarohana, itdiaavy eo mamorona nysari-tanyho azy aoGoogle Maps.
Miara-miasa i Garmin sy ny tsipika?
Ampifandraiso nyGarminfitaovana hahazoana laharanalevitraendri-javatra izay ianaoafakaampiasao rehefa mandeha. Raha vao mifandray ianao, dia nakarina tao ireo hetsikaGarminMifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth na ny solosaina dia hifindra ho azylevitraianao koaafakamandrindra ny fanazaran-tena ataonao.
Tsara kokoa ve i Garmin sa vetaveta?
Raha te-firaketana ny dianao ianao na mihazakazaka mankanylevitrany vola kely indrindra, mifikiraGarmin. Raha mila famantaranandro ianao dia izayBebe kokoafa tsy famantaranandro GPS fotsiny ary mihazakazaka mivantana nylevitrafampiharana, avy eo ny Apple Watch dia anaotsara indrindrasafidy.
Azonao atao ve ny mampiasa Strava amin'ny fitetezana?
levitramihodina isaky ny iPhone aryAndroidho lasa solosaina mihazakazaka sy mandeha bisikileta (syiSIKAmiasa miaraka amin'nyGPSfamantaranandro sy lohan-doha koa).
Mihodina ve ny tsiranoka amin'ny alàlan'ny fivezivezena?
Mihodina Mahatalanjonafizarana mankany amin'ny zotramiala-by-indrayfeon'nyFikarohanaamin'ny RunGo. Betsaka ny olona rehefa mandeha dia mitadylevitramihazakazaka fizarana ary manandrana mihazakazaka vitsivitsy amin'izy ireo rehefa mizaha tanàna vaovao. Zahao ity fisehoan-javatra RunGo vaovao ity: mialalevitrafizarana mankany amin'ny lalana mihazakazaka, ao anatin'ny iray minitra eo ho eo.
Mila fihenam-bidy ho an'ny Garmin ve ianao?
azaianareombola handeha ahomitakynylevitraFihaonambePremium an'ny sakafosubscription tier) hamoronana làlana manokana, ity vaovao ityGarminNy endri-javatra fampandrenesana dia ahafahana manome kintana ny zotra fitetezan'ny namanao ary mampifangaro azy ireo amin'ny fitaovana raha toa kaianareomahatsapa aingam-panahy (natehanandrana hangalatra KOM / QOM vitsivitsy).05/14/2020
Ahoana ny fandefasana fampianarana avy any Strava mankany Garmin anao?
Fandefasana fampianarana avy any Strava mankany amin'ny fitaovanao Garmin Garmin dia manolotra ny fahaizana mandrindra ny zotra avy any Strava mankany amin'ny fitaovanao Garmin amin'ny alàlan'ny Garmin Connect. Raha vantany vao avelanao hampiasa ity endri-javatra ity dia azonao atao ny manome kintana ireo lalana tianao indrindra ao amin'ny kaontinao Strava ary halefa any amin'ny fitaovanao Garmin izy ireo amin'ny fotoana manaraka ampiarahinao.
Ahoana ny fomba hanondranana ny lalana Strava mankany amin'ny sisiny?
Teo aloha ianao dia tsy maintsy nanondrana ny zotra Strava ho rakitra gpx, mampifandray ara-batana ny singa Garmin anao amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny USB, ary avy eo kopia ilay rakitra gpx ao anaty fampirimana vaovao ao amin'ny tarika Edge anao. Avy eo dia hafarana ho toy ny làlan-kizorana rehefa avy nampandeha ilay fitaovana ianao.
Ahoana no hametrahako an'i Strava eo amin'ny Garmin Edge-ko?
Mitadiava zotra Strava ary ampidino ary apetraho izany - ny app dia hikambana amin'ny unit Edge mifandraika aminao: sokafy izao ny app Strava Routes (b) vao napetraka ao amin'ny tarika Garmin anao raha tsy mitendry ny bokotra IQ (a) eo amin'ny efijery ianao: Aorian'ny fisoratana anarana, ny Strava Routes amin'ny fitaovana Edge dia hipetraka miaraka amin'ireo zotra Strava noforoninao: